नवउदारवादको कहर | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / नवउदारवादको कहर
Posted by: युगबोध in विचार January 6, 2019	0 63 Views
सन् १८८५ मा डा. प्रकाशचन्द्र लो हनी अर्थमन्त्री भएको समयमा ने पाललाई उदारवादी अर्थतन्त्रको दिशामा प्रवे श गराएका थिए । यो पञ्चायतकालको कुरा हो  । सन् १९९० मा ने पालमा पञ्चायत विरो धी आन्दो लन चर्कियो  । पञ्चायतको अन्त्यपश्चात सन् १९९२ मा महे श आचार्य अर्थमन्त्री भएको समयमा उनले यो मुलुकलाई निजीकरण, नवउदारीकरण, भू–मण्डलीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवे श गराउन पुगे  । त्यतिबे ला डा. रामशरण महत यो जना आयो गका उपाध्यक्ष थिए । त्यसपछि ने पाली कांग्रे सको सरकारको पालामा नै राष्ट्रिय उद्यो गधन्दाहरु भटाभट निजीकरण भए । ने पाली कांग्रे स सरकारले कौ डीको मूल्यमा ती राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्व राख्ने उद्यो ग धन्दाहरु बिक्री गर्दा मुलुकमा कमिसनतन्त्रको खो लो नै बग्यो  । १९९० को परिवर्तनपश्चात राज्य सञ्चालनको विधिमा पुगे का पञ्चायतकालका चप्पले ने ताहरु रातारात नवधनाड्य वर्गमा परिणत भए । लाउडा जहाज खरीद प्रकरणमा भएको कमिसनको खे लमा स् वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद को इराला नै मुछिएका थिए । साझा यातायात, ट्रली बस से वा ने पाली कांग्रे सकै पालामा डुबे का थिए । अहिले वाइड वडी विमान प्रकरणमा पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी कमिसन र भ्रष्टाचारको अभियो गमा मुछिनु पनि त्यसै को निरन्तरताको एउटा कडी हो  । यो लगायत दे शमा चुलिदै गएको भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, अनियमितता र ने पाली कांग्रे सको सर्वसत्तावादी अधिनायकवादका विरुद्धमा दे शमा नौ वामको आन्दो लन चर्के को थियो  । यसै क्रममा कांग्रे सभित्रको अन्तरकलहले पनि चर्काे रुप लियो  । आफ्नै कारणले ने पाली कांग्रे सको बहुमतको सरकार ढल्न पुग्यो , दे श मध्यावधि निर्वाचनको दिशामा मात्र गएन, ने पाली कांग्रे समा विभाजन समे त आयो  ।
यसरी ने पालमा प्रवे श गरे र बबण्डर मच्चाएको नवउदारवादले राजकीय अर्थतन्त्रको सा“चो दलाल पू“जीवादको हातमा किस् तीमा राखे र बुझायो  । राज्य नियन्त्रित अर्थनीति दलाल पूृजीवादी अर्थनीतिमा बदलिदै गयो  । अब राजनीति, आस् था, निष्ठा, दे श र समाजसे वाको भावनाबाट स् खलित हुदै गयो  । नवउदारवादी अर्थतन्त्रले उपभो क्तावादी संस् कृतिलाई प्रश्रय दियो  । ‘जसरी हुन्छ कमाउ मो ज गर’ भन्ने उपभो क्तावादी संस् कृतिले बजार पिट्न थाले पछि राजनीति एउटा कमाउ धन्दामा बदलियो  । राजनीतिमा मूल्य बिघटनको रफ्तार यति ते ज गतिमा अगाडि बढ्यो कि सिद्धान्तप्रतिको दृढता, परिवर्तनप्रतिको आस् था, दे श र जनताप्रतिको निष्ठा तथा सादगीपनको राजनीति गर्ने पात्रहरु प्रहशनका चिप्स बन्न पुगे र पुगिरहे का छन् । राष्ट्रको ढुकुटीमा यति लुट मच्चाइयो कि पुरुष सांसदले सुत्के री भत्ता खाने , ब्रम्हनालमा पुगे पछि खाने औ षधिको विल बनाएर पै सा लिने सम्मका लज्जाजनक कामहरु भए । सत्ता ध्रुवीकरण र समीकरणमा सांसद किनबे चमा करो डौ ंको चलखे ल कथित शिशु प्रजातान्त्रिक संस् कृतिका रुपमा ने पाली रानजीतिमा अगाडि आए ।
आज त्यो संस् कार भित्र–भित्र झन झांगिदै गएको छ । हिजो का दिनमा नवउदावाद, भू–मण्डलीकरण र उपभो क्तावादको तीब्र निन्दा गर्ने एक से एक ‘क्रान्तिकारी’ ने ता तथा ने तृहरु आज नया राजकुमार र नया राजकुमारी जस् ता भएर हिड्छन् । कतिपय क्रान्तिको थिंक टे ंक ठानिएका ने ताहरु नवउदारवादका प्रवक्ता नै बने का छन् । आज मुलुक कहा छ ? जनताको अवस्था कस्तो छ ?आज यी प्रश्नहरु तीनका सरो कारका विषय बने का छै नन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार ने पालका २५ प्रतिशत जनताले दिनको ५२ रुपै या पनि कमाउदै नन् । गरिबी निवारण को षका उपाध्यक्ष मासिक एक लाख तलब बुझ्छन् । दे शका २५ प्रतिशत जनताको घरमा दिनमा एक पटक मात्र राम्ररी चुलो बल्छ । यसप्रति कुनै राजने ताको चिन्ता छै न । सरकारस“ग यो वर्गलाई सम्बो धन गर्ने कार्यक्रम पनि छै न ।
दे शको अर्थतन्त्र दलाल पूृ“जीवादको हातमा गएपछि दे शमा भू–माफियाको यति चकचकी बढे को छ कि समतल उर्वर अगो ल भूमिको झण्डै सात प्रतिशत क्षे त्रफलमा भू–माफियाहरुले गिट्टी र बालुवा बिछ्याएर बाझै पल्टाएका छन् । कुनै बे ला चामल निर्यात गर्न कम्पनी खो ले को हाम्रो दे शले गत आर्थिक वर्षमा मात्र छवटा मुलुकबाट २४ अर्ब बराबरको चामल आयात गरे को थियो  । ने पाल सरकारले एकातिर धान दिवस मनाइरहे को हुन्छ अर्काे तिर ने पालीहरुको भान्सामा भारत र चीनबाट मात्र हो इन जापान र इटलीबाट आयात गरे को चामल पाकिरहे को हुन्छ ।
यति मात्र हो इन ने पालले ४४ करो डको धनिया र दुई अर्बको कागती मात्र आयात गरे को तथ्यांक छ । कृषिप्रधान मानिएको यो मुलुकमा चालु आर्थिक वर्षको पाच महिनामा ३० अर्ब रुपै या खाद्यान्नमा लगानी भइसके को छ । दे शको अर्थतन्त्रको बागडो र दलाल तथा नो करशाह पू“जीपति वर्गको हातमा पुगे पछि आजको लो कतान्त्रिक गणतन्त्रको मन्त्रिमण्डल पनि दलाल पूजीपति वर्ग र नो करशाहहरुको कारिन्दा जस् तो पो भएको छ । किनभने दलाल तथा नो करशाही पूजीपति वर्गले कमाउने नाफाको विशे ष अंश खाएरै राज्य सञ्चालनको विधिमा रहे का ने ताहरु विलासी जीवन बा“चिरहे का दे खिन्छन् । ने पालको दलाल पू“जीपति वर्गको ठूलो हिस्सा उत्पादन र उद्यो गमा छै न । व्यापार र दुई नम्वरी धन्दामा छ । यो वर्गको उपस् िथति स्थानीय राजनीतिदे खि संस् ाद, संसदीय समिति, अझ विशे ष गरी विकास समितिमा समे त यसको बलियो पहु“च भएको दे खिन्छ ।
अब्राहम लिंकनले संसदीय प्रजातन्त्रलाई जनताका निमित्त जनताले जनताद्वारा सञ्चालित परिपाटी भने र परिभाषा दिएका छन् । तर यो व्यवस् थाको असली चरित्र ‘पूजीपतिका निमित्त पूजीपतिले र पूजीपतिद्वारा’ का रुपमा प्रकट भइरहे को छ । ने पालको परिदृष्यमा यो प्रणाली ‘दलाल पू“जीपतिका निमित्त, दलाल पूजीपतिले र दलाल पूजीपतिका लागि’ को चरित्रमा प्रकट भएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा राज्य सञ्चालनको विधिमा विपन्न वर्गबाट उठे को व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनु भने को अपवाद मात्र हो  । समग्रमा यो व्यवस्थामा सम्पन्नशाली पूजीपति वर्गको व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो धे रै महंगो निर्वाचन हुने व्यवस् था हो  । ने पालकै परिवे शमा पनि एउटा नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा विजय प्राप्त गर्न अब एक करो ड भन्दा कम खर्चले नपुग्ने दे खिन्छ । तसर्थ अब राजनीतिक कार्यकर्ताले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न कि दलाल पूजीपति वर्ग, भू–माफिया, शिक्षा तथा स् वास् थ्य माफियाको तालमा नाच्नुपर्छ । कि त त्यो स् थानमा दलाल पू“जीपतिका प्रतिनिधि, ठूला ठे कदार तथा विभिन्न क्षे त्रका माफियाहरुलाई छो डिदिनुपर्दछ । यो ने पालको राजनीतिमा नवउदारवादले ल्याएको डरलाग्दो राजनीतिक मूल्य विघटन हो  ।
वर्तमान सरकारले सिण्डिके टको अन्त्य गर्न खो ज्यो ,। अवरो ध पै दा भयो  । सुन तस् करका ठूला नायक समाउने बाचा ग¥यो तर सके न । निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरणका अपराधीहरुलाई पत्ता लगाउन सके न । सरकारले प्रत्ये क वर्ष दे शलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्छ । चालु बजे टमा पनि वर्तमान सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियो जना लगायतका कार्यक्रम अगाडि सारे को छ । खाद्यान्न उत्पादन बढाउन किसानलाई विभिन्न सहुलियत दिने घो षणा भएका छन् तर खै के तालमे ल मिल्दै न यी कार्यक्रमहरु पनि परिणाममुखी बन्न सके का छै नन् । सामाजिक सुरक्षा यो जनालाई सरकारले ठूलो युग नै परिवर्तन भएको प्रचारप्रसार गरे को छ तर यो मजदुर, पू“जीपति र सरकारको समन्वयमा आएको कार्यक्रम हुनाले व्यवहारिक प्रयो गशालामा जा“दा यो कार्यक्रम पनि कथनीअनुरुप परिणाममुखी बन्न कठिन दे खिन्छ । किनभने व्यवस्था त यही हो  ।
बजार उदारीकरणमा प्रवे श गरे पछि विश्व व्यापार संगठन, साफ्टालगायत संघ संस्थाहरुसग ने पाल एक सदस् य दे शका रुपमा जो डिएको छ । यसले गर्दा ने पाल जस् तो सानो पै मानामा उत्पादन गर्ने दे शले ठूला–ठूला फार्मिङमा उत्पादन गर्ने दे शहरुसग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दै न । विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत ने पालले विभिन्न अन्तरदे शीय सन्धि सम्झौ ताहरुमा हस् ताक्षर गरे को छ । तसर्थ दे शका दलाल पूजीपतिहरुले जुन दे शको सामान सस् तो छ, जुन दे शको सामान ल्याएर बे च्दा फाइदा हुन्छ, त्यही सामानको वे प्रवाह आयात गर्दछन् । विश्व व्यापार संगठनको सदस् य भएपछि अरु मुलुकबाट हुने आयातलाई सजिलै रो क्न पनि सकिदै न । दलाल पूजीपति वर्गलाइ नाफासित मात्र सरो कार हुन्छ । राष्ट्रिय उत्पादनसित मतलव हुदै न । आज भन्दा १२ वर्ष अगाडि रो जगारीका लागि विदे श कमाउन जाने ने पालीको संख्या ११ लाख थियो  । त्यो संख्या आज ५० लाख पुगे को छ । विदे शमा गएर हण्डर ठक्कर खाएर फर्के का कै यन युवाहरुले पशुपालन, व्यावसायिक खे ती, माछा तथा कुखुरापालन आदिमा हात हाले का पनि छन् । तर बजार मूल्य र बजार व्यवस् थापन हुन नसक्दा के ही अपवाद बाहे क तिनीहरु कि डुबे का छन् कि निर्वाहमुखी मात्र भएका छन् । ने पाली किसानले परिश्रम गर्नै नखो जे का हो इनन्, भर्खरै ने पाली चियास“ग भारतका चिया उत्पादकहरुले गुणस् तरमा प्रतिस् पर्धा गर्न सके नन् ।
त्यसकारण भारतीय किसानहरुले आफ्नो सरकारलाई गुणस् तर र क्वारे न्टाइनको प्रश्न उठाएर ने पालस‘“ग चिया आयात रो क्न भारत सरकारसित माग गरे का छन् । त्यसो त ने पालले पनि स् वदे शी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि विदे शी बस् तुमा के ही करथप गरे र सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ । त्यो काम यो सरकारले र यही व्यवस् थाले पनि गर्न सक्ने काम हो  । व्यापार हो इन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अनि बजे ट तर्जूृमा गर्नुपर्दछ । शै क्षिक बे रो जगारहरुलाई शै क्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिनाधितो सहुलियत ऋण तथा पछि अनुदान उपलब्ध गराएर प्रो त्साहन दिनुपर्दछ । किनभने त्यो दक्ष र चे तनशील जनशक्ति हो  । त्यो जनशक्तिलाई उत्पादनमा परिचालित नगराइकन मुलुकले सकारात्मक संक्रमणको बाटो समाउन सक्दै न । अन्यथा यसरी नै नवउदारवादी बजारशास् त्रको विधिमा खुलमखुला दलाल पू“जीपति वर्गको अर्थतन्त्रमा कमान्ड चल्दै जाने हो भने दे श झन पछि झन परनिर्भर र हरिकंगाल हु“दै जाने खतरा छ । त्यो खतरा भने को राष्ट्रको निर्मम र कहाली लाग्दो भविष्य हो  । नवउदारवादले हाम्रो दे शलाई त्यही अ“ध्यारो भविष्यतिर डो ¥याइरहे को छ । किनभने यो शास् त्रले उत्पादक मजदुर किसानलाई हो इन दलाल पू“जीपति वर्गलाई मल हालिरहे को छ ।
Previous: जीवन, योगसाधना र अनुसन्धान
Next: अन्तरिम आदेशपछि सुल्टिएको बाटो